Factory Tour - Guangzhou Aiweidy Laydhka codka Co., Ltd
G uangzhong Aiweidy Laydhka codka Qalabka Co, Ltd, waa cilmi iyo horumarka, wax soo saarka, iibka iyo adeegga of nalalka xirfadeed iyo dhawaaqa ee garoonka ayaa waxaa ka mid ah shirkadaha teknoolojiyad sare Company waxa uu ku yaalaa degmada Baiyun ee Guangzhou City, oo daboolaya 15 acra, dhismaha goobta of 25000 m ^. Dhirta Garden, il ornamental gudaha balli. 700 m ^ 2 warshad la studio multi-functional caaqil, in ka badan 1,000 mitir murabac oo meel bannaan oo casri ah xafiiska.
C ompany leeyahay qalabka wax soo saarka sare ma aha oo kaliya, laakiin sidoo kale tiro ka mid ah oo tayo sare leh-, technology sare, injineerada xirfadeed iyo Hadba shaqaalaha xirfad iyo farsamo, tiro badan oo ku dadaala, midnimo shaqaalaha u fiican.
A waxyaabaha iweidy raaxaysan sumcad wanaagsan ee suuqa caalamiga ah, gaar ahaan our nalalka madaxa dhaqaaqaan, nalalka LED iyo nalalka dibadda. Haddaba, alaabta waxaa dhoofiyo Europe, koonfur bari Asia, Bariga Dhexe, Waqooyiga iyo Koonfurta America iyo dalalka kale iyo gobollada. Raadinta ka hor, dhammaan asxaabtii Aiweidy tiirin doonaa rogo oo ka mid ah tayada ugu horeysay, adeegga ugu horeysay, hal-abuurnimo hore iyo kalsoonidii ugu horeysay sida had iyo jeer in ay u adeegaan macaamiisha iyo saaxiibada ka tirsan gudaha iyo dibadda.